Ny Mpandrindra Fitenenana
Teny Mitarika :
Manomboka eto isika, dia hamakafaka Fitsipika manokana ivelan’ireo Lesona 21 efa nodinihintsika teo aloha . Raha hiverenana kely ireo Loharano niteraka ny Fiteny Hebreo, voasokajy ho anisan’ny “Fiteny Semitika” , dia ambara aminareo Mpianatra , fa ny “Gramera Semitika”, raha miresaka ny “Mpandrindra Fitenenana”, dia anisan’ireo antsoina hoe “Kian-teny Tsy Misy Fiovana”.
Izany hoe : Tsy mba anisan’ny Anarana, na ny Matoanteny, na ny hafa ankoatr’ireo izy , fa dia izay izy tsy miovaova izay.
Ka izay dinihintsika Voalohany eto ary, dia :
1.- Ny Mpandrindra Fitenenana : .
11.-Ny « Mpandrindra Teny » ה Ha ( shêva Patah =a fohy dia fohy ) = Moa ve ? = Moa tsy izao ve ? = Moa tsy izany va ? , dia tsy maintsy miara-dia mandrakariva amin’ny Teny iray.
Ny ה Ha ( Shëva Patah eto ny a ) , dia miova ho ה Ha ( Patah eto ny a ) , eo alohan’ny Teny miatomboka amin’ny « Reni-soratra An-tenda » tsy ahitana « Qâmets » , na eo alohan’ny « Shêva ».
Ohatra : האלך Ha’elek = Handeha ve Aho ?
הבמחנים Hab’machaniym = Moa Tsy ao Anatin’ny Toby ve ?
Ny ה Ha ( Shêva Patah ny a eto ) , dia miova ho ה Hê ( Sêgôl ny e eto ) , eo alohan’ny Teny miatomboka amin’ny « Reni-soratra An-tenda » ahitana « Qâmets ».
Ohatra : האמרתי Hê’âmar’thiy = Moa Niteny izany ve Aho ? = Tena Niteny izany ve Aho ?.
12.- Ankoatr’io « Mpandrindra Fitenenana » ה Ha eo aloha io , dia eto kosa
indray no hijerena ny לא L’ô = Tsia . Ity « Kianteny » eto ity, dia miasa eo alohan’ny « Matoanteny-Mpanondro” na eo alohan’ny “Mpilaza-toetry ny Anarana”..
Ny אל ‘Al = Tsy Izany Fa … , dia ho eo alohan’ny « Ho Avy » hatrany, ka manjary manana ny hevitry ny « Toetra Mirafitra amin’ny Matoanteny ».
Ny בל Bal = Tsy Izany Fa … , dia Teny fampiasa amin’ny « Tonon-kalo ».
Ny אין ‘Aiyn = Ts’isy N’Inon’Inona , dia ho eo alohan’ny « Anarana » na ho eo alohan’ny« Teny Mpisolo Anarana ».
13.-Ireto « Mpandrindra Fitenenana » samihafa dinihintsika manaraka eto kosa, dia
indraindray izy ireny milaza « Hetsika », nefa koa misy ireo « Tsy ahitana Hetsika » . Ohatra :
Ny הלם פה Halam Poh = Ity na Eto , Tsy misy « Hetsika » no ambara eto .
Ny הנה Henôh = Ety , dia anehoana ny fisian’olona iray lavidavitra tiana hiroso akaikikaiky kokoa ilay olona faharoa ( toa miantso ohatra ) .
Ny כה וכה Kôh V’kôh = Etsy sy Eroa , toa milaza zavatra misavoritaka nefa miandrona fotsiny eo .
Ny שם Shôm na Shâm = Iry , manondro zavatra « Tsy Mihetsika » = Midorevaka foana eo.
Ny שםה Shâmôh na Shâmâh = Ery , misy « Hetsika » andrasana hataon’ny olona iray, na anirahana amboa handeha haka zavatra eny lavitra eny.
14.- Ireto manaraka ireto kosa , ohatra , dia tanisaintsika tsotra ihany, satria fiteny fanaon’ ny olona andavanandro sy eo amin’ny tontolo iainany :
Ny אפה ‘Epôh na ‘Efôh ,sy ny איה ‘Aiyeh , ary ny אי ‘Eiy , samy dikan’ny « Aiza ? » « Tsy misy Hetsika » , satria toa milaza toerana tsy fantatra loatra na aiza na aiza .
Ny אנה ‘Ânâh na ‘Ânôh = Aiza ? kosa dia milaza « Hetsika », handeha hiara-mikaroka ilay zavatra very, ohatra .
Ny מאין Me’aiyn = Avy Aiza ? Tonga avy lavitra ary mihaona amin-kavana, ka anontaniany ny toerana nialàny .
Ny מתי Môtaiy na Mâthaiy = Oviana ? Te-hanontany hoe : Oviana no nahatongavanao teto amintsika , fa tsy hitanay mantsy ny nahatongavanao ê !
Ny איך ‘Eiyk , sy ny אכה ‘Ekâh na ‘Ekôh , dia samy midika « Ahoana ?» na « Nahoana ?»
Ny אן ‘Ân na ‘Ôn = Ka Ahoana …! Misy mitratrevatreva avy any dia mivandraka amin’ ilay olona atrehiny, dia anontanian’io alona vandrininy io, dia hoy ilay faharoa : E! Ka ahoana ê ! Inona no tianao hambara ?.
Ny הנה Hineh sy ny הן Hen = Inty na Indro . Samy milaza ireo miantso na miangavy ny zaza hanatona handray ny fanomezana omena azy.
Ny אולי ‘Oulaiy = Angamba . Tsy dia azony antoka loatra ny zavatra hitany na reny, ka dia mba miteny amin’ny namany izy hoe : Tsy dia fantatro loatra fa « Angamba » izay ilay reko ê!
Ny אתמל ‘Êth’môl = Omaly . Milaza fotoana efa lasa na efa niserana.
Ny אמש ‘Êmêsh = Omaly Hariva na Omaly Folakandro .
Ny מהר Mâhôr = Rahampitso . Toa milaza hoe: Aza maika loatra fa Rahampitso ihany anie dia hihaona amin’ny zanakao, na ny ray aman-dreninao ‘ianao ê!
Ny פנימה Peniymâh na Peniymôh = Ao Anatin-trano = Ao Anivon-toerana .
Ny מעלה Marh’lâh na Marh’lôh = Eo Ambony . Milaza fipetrahan-javatra ambony, na eo ambony latabatra izany, na eo ambony hazo .
Ny מטי Matâh na Matôh = Eo Ambany . Tsy aiza akory no misy ny zavatra karohinao, fa Eo ambanin’ny kapanao ihany ê !
Ny teny roa eto איך ‘Aiyêkâ = Aiza ‘Ianao ? sy ny איו ‘Aiyvô = Aiza Izy ? dia samy milaza « Hetsika » . Ny Voalohany manontany ny namany hoe « Aiza ‘Ianao » ( mety amin’ny andro alina izany ohatra ) , ary ny Faharoa kosa toa manontany ny namany miaraka aminy, ka manontany ny namany Fahatelo hoe « Fa aiza no nalehan’ i Lery teo ? ( Asa na nihodinkodina any an-tsena any izy , ohatra ).
Fa misy “Eritreritra Miserana” toy izao : Ny Voalohany , raha raisin any Tenintsika Malagasy, dia toa mitovy amin’ny hoe : “ Aià Kày?= Aiza kay ?” , ary ny Faharoa indray dia toa mitovy amin’ny hoe : “Aià Vào ? ( fanao amin’ny Fitenim-paritra sasany izany ).
2.- Vondron-Teny Mpandrindra Fitenenana:
Tsy dia misy fahasamihafana firy amin’izay hitantsika teo ity »Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » manaraka eto ity. Ny mampiavaka azy kosa , na misy Teny tena mitovy tamin’ireo notanisaintsika teo aloha teo ireo aza ,dia izy ireto « Fitaovam-pitenenana hoenti-miresaka », na « Hoenti-manambara hevitra mivantana, na atao amin’ny Lahatsoratra »
Mba hampahazava misimisy kokoa ny tiantsika ambara dia handraisantsika ohatra :
Raha Mpampianatra ‘Ianao, ka miresaka mivantana amin’ny Mpianatra, ireo fanazavan-desona rehetra ampianarinao, dia ahazoanao mandray ny iray na maromaro amin’ireto « Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » ireto, ka hahatonga hahay mampihatra izay nampianarinao tamin’ireny ohatrohatra samihafa nambaranao ireny .
Ireto manaraka ireto ny Santionany amin’ireo « Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » ireo :
Ny אהרי כן ‘Ahareiy Ken = Aorianan’izay na Ankoatr’Izay . Eo am-panazavan-dresaka ‘Ianao, dia mbola te-hitanisa zavatra hafa koa ivelan’izay efa voalazanao.
Ny על כן Rhal Ken sy ny לכן Lôken = Noho Izany na Noho ny Antony na Arak’Izany.
Ny מלמעלה Mil’marh’lôh sy ny ממעל Mimarhal = Any Ambony . Toy ny ataon’ny Mpitoriteny raha manentana ny Kristiana hibanjina ny Any An-danitra, fa tsy dia hovariana loatra amin’ny olam-piainana eto an-tany .
Ny לפנימה Liph’niymôh na Liph’niymâh = Ao Anaty . Raha amin’ ny “Mpandrindra Fitenenana” andavanandro, dia ilazana zavatra “Ao anaty poketra” ohatra. Fa satria « Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » izy eto, dia ilazana « Ao Anaty Fo na Eritreritra » . Ny zavatra ao anatinao, sns…sns…
Ny מתהת Mithahath = Ao Ambany . Milaza zavatra any am-parakitsokitsoka .
Ny שנית Sheniyth = Fanindroany Indray Izao . Raha nahita na nahafantatra zavatra tsy nety tamin’ny zanakao ‘Ianao , ary efa nampitandrina azy ‘Ianao raha mbola hanao « Fanindroany » izy, dia hanafay azy mafy ‘Ianao .
Ny היום Haiyôm = Ankehitriny . Raha amin’ny ankapobeny dia « Anio » izany, kanefa dia ilazana « Fampahatsiahivana » na « Fampiomanana » kosa, raha anambarana, fa «Tsy mety ny mangatak’andro, fa tokony Ankehitriny izao ihany no hanatanterahana ny Laminasa efa narindra hatramin’izay ».
Ny מהרה M’herâh = Tsy Ho Ela . Raha amin’ny Kristiana, na Mpivavaka hafa, dia ilazana mivantana ny « Fiavian’ny Tompo » « Tsy Ho Ela » mba hampiraikitra tsara ao anaty ny fiandrasana Azy .
Ny אמנם ‘Ôm’nâm = Marina Tokoa ! Fomba fitenin’i Kristy Tompo izany hoe : « Lazaiko aminareo marina tokoa… » .
Ny פתאם Pith’’ôm = Tampoka ( amin’ny fomba tena tampoka ) . Raha milaza ny Fiavian’ny Tompo , dia amin’ny fomba miafina amin’ny olona izany noho ny tsi-fisian’ny filaza mialoha fa dia « Fiaviana na Fahatongavana Tampoka » .
Marobe ireo «Vondron-teny Mpandrindra Fitenenana » tokony haseho eto, fa ampy kosa ireo afaka hanampy anareo amin’ny fitadidiana azy ireny. Herezo hatrany ary ry Mpianatra malala !